Prof. Jawaari oo maanta ku guuleystay kursiga Koonfur Galbeed ee Aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Prof. Jawaari oo maanta ku guuleystay kursiga Koonfur Galbeed ee Aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya
Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta ku guuleystay kursiga xildhibaanimo ee Aqalka hoose ay Koonfur Galbeed ku leedahay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Prof. Jawaari ayaa tartanka doorashada kaga guuleystay musharax kale oo lagu magacaabo C/raxmaan Sheekh Ibrahim Xeydar islamarkaana ahaa wasiirkii hore kaluumeysiga ee xukuumadda federaalka Soomaalya.
Xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta u codeeyay labadaasi musharax, wuxuuna Prof. Jawaari helay 45 cod, halka C/raxmaan Sheekh uu isna helay 5 cod.
Codeyntaasi oo ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa markii hore la filaayay in Prof. Jawaari uu loolan adag soo wajahi doonno, balse ay suura-gashay inuu kursigiisa dib u helo.
Dhinaca kale, waxaa magaalada Baydhabo weli ka socda codeynta musharixiinta kale ee u tartameeysa xubnaha maamulka Koonfur Galbeed u matalaya Aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Musharax Ibraahim Isaaq Yaroow oo ka mid ahaa musharixiinta Koonfur Galbeed u tartameeysay Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa noqday kii ugu horeeyay ee xilkaasi ku guuleysta, kadib markii ay u tanaasushay musharaxad Ruqiyo Sheekh Maxamed oo isaga la tartameeysay.
Sidoo kale, xildhibaanad Fowsiyo Sheekh Maxamed oo iyaduna ka mid ahayd musharixiinta maanta tartameeysay ayaa ku guuleystay kursiga xildhibaanada Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, kadib markii ay heshay codad gaaraya 49 cod.